Ciyaaraha caawa ee koobka adduunka - BBC News Somali
Ciyaaraha caawa ee koobka adduunka
1 Luulyo 2014
Image caption Ciyaaryahanka Belgium ee Vertonghen
Koobkan adduunka ee ka soconaya waddanka Brazil miyuu noqon doonaa markii uu Lionel Messi ku biiri lahaa ciyaaryahanada waa weyn sida Pele iyo Maradona, ee u hogaamiyay kooxahooda biladda ugu weyn kubadda cagta?
Ciyaaryahanka oo 27 jir noqonaya maalinta Talaadada ah ayaa haysta fursad uu ugu dhawaan lahaa in uu ku guulaysto tartanka.
Messi ayaa ah xiddiga la daawanayo maalinta 20-aad ee koobka adduunka, hasayeeshee waxaa jira ciyaartooy kale oo iyana aan la dhayalsan karin.
Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa dhaliyay 10 gool 8-dii ciyaar ee u dambeysay ee uu u saftay xulkiisa Argentina.
Dhanka kale kooxda ay caawa iska hor imanayaan ee Switzerland, ayaa ciyaaryahanka ugu firfircoon ee isha lagu hayo ciyaarta maanta waxa uu yahay ciyaaryahan Xherdan Shaqiri, oo 3 gool u dhaliyay xulkiisa ciyaartii ugu dambeysay ciyaarihii guruubyada ee ay la yeesheen xulka Honduras, goolashaasi saddexda ah ee halka mar uu dhaliyayna waxa ay noqdeen kuwii kontanaad ee la dhaliyo taariikhda Koobka Adduunka.
Hal mar oo kaliya ayey Argentina iyo Switzerland ku kulmeen koobka adduunka, waa tartankii 1966-dii, markaa oo kooxda reer Koonfur Ameerika ay 2-0 guusha ku raacday.
Switzerland ayaa waxa ay guulaysatay hal ciyaar oo kaliya lixdii kulan ee ay la yeelatay wadammada Koonfur Ameerika, guushaasina waxa ay ka gaartay kooxda Ecuador intii ay socdeen ciyaarihii guruubyada ee tartankan.
Ciyaarta kale ee caawa la dheelayana waxa ay dhexmari doontaa xulalka Belgium-ka iyo Mareykanka.
Hal mar oo kaliya ayey Mareykanka ay ciyaar caalami ah guuldaro dhabarka u saariyeen kooxda Belgium-ka, ciyaartaasi ayaa ka tirsaneyd koobkii adduunka ee la qabtay 1930-kii, markaana Mareykanka waxa uu ku badiyay 3-0.
Kooxda Belgium-ka ayaa ka soo baxay ciyaaraha heerka guruubyada lix jeer oo ka mid ah todobadii jeer ee ugu dambeysay oo ay ka qeyb qaataan Koobka Adduunka.
Iyadoo laga shakisan yahay in caafimaadka ciyaaryahanada Vincent Kompany iyo Jan Vertonghen, ayaa waxaa suuragal ah in ciyaaryahanka rug cadaaga ah ee Daniel van Buyten uu la wareego maamulka difaaca kooxda Belgium-ka.
Su’aasha taaganse waxa ay tahay 36 jirkan miyuu celin karaa orodka iyo farsamada ciyaaryahanada weerarka uga dheela xulka Mareykanka ee Dempsey, Jermaine Jones and Graham Zusi?
Haddiise lagu qiimeeyo heerka ciyaaryahanka jawaabtu waa haa.
Oo ciyaartii ugu dambeysay ee guruubyada ee ay kooxdiisa la yeelatay xulka Koonfur Kuuriya ee 1-0 ku badiyeen ciyaaryahanka waxa uu orday oo uu xariiftamay masaafo dhan 10,000 oo mitir, masaafadaasi oo ka badan inta ay kooxda sameysay.